Hurumende yeMubatanidzwa Yotatsurana neNyaya yeZvekupa Hupfumi kuVatema
Kurume 03, 2010
Zvinhu zvaita manyama amire nerongo muhurumende yemubatanidzwa zvichitevera kusawirirana kunotyisa pakati peZanu-PF neMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai panyaya yemutemo wekuendesa hupfumi kuvatema.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti neChina mukanzuru yemakurukota muchazeyiwa nyaya iyi.
Asi vamwe vanoti mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vachaita mumwe musangano wechimbichimbi kana kuti Extraordinary Council of Ministers Meeting kuti vagadzirise nyaya iyi, iyo yava kubvarura hurumende nepakati.
Gurukota rezvemaindasitiri, VaWelshman Ncube, vakawirirana neChitatu naVaTsvangirai kuti gurukota rezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema, VaSaviour Kasukuwere, vakaresva pavakaburitsa zvisungo zvine chekuita nezvehurongwa hwekuendesa hupfumi kuvatema vasina kusuma dare remakurukota.
VaNcube vaudza vemabhizimisi muHarare neChitatu kuti nyaya iyi yave kudare remakurukota rinoona nezvemitemo.
Asi veZanu-PF vanoti havasi kuzodzokera kumashure panyaya iyi.
Zanu-PF iri kuomesawo musoro panyaya yenhaurirano ichiti inoda kuti zvirango zvakatemerwa vakuru vayo zvitange zvabviswa isati yadududza pane zviri kudiwa neMDC.
Mashoko aya apa kuti MDC ironge musangano wayo wechimbichimbi, weNational Executive neChina, kuitira kuti izeye kuminama kwaita zvinhu muhurumende yemubatanidzwa.
Mutauriri weMDC, VaNelson Chamisa, vanoti nyaya yekungoda kutora hupfumi huchipihwa vashoma munyaya dzezvematongerwo enyika yave kuvashaisa hope.
Asi vanodzidzisa mitemo paUniversity of Zimbabwe, VaMunyaradzi Gwisai, vanoti nyaya yekuti VaKasukuwere vakaresva here kana kuti kwete, inyaya yakaoma sezvo pamutemo zvichikwanisa kuitwa. Asi VaGwisai vati sezvo paine chibvumirano chezvematongerwo enyika pakati pemapato ari muhurumende yemubatanidzwa, VaKasukuwere havaifanirwa kunge vakaita zvavakaita vasina kugara pasi nevamwe vose vari muhurumende.
Hurukuro naVaMunyaradzi Gwisai